တရုတ် 640 × 480-B အလူမီနီယမ်သေတ္တာစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ | Ruichen
1. အရွယ်အစား： 640*480*56mm
2. အလေးချိန်: 4.1kg
3. မော်ဒယ်: P2.5/P4/P5
6.Use of: Indoor
၇။ ဆက်စပ်ပစ္စည်း: မြန်သောသော့ခလောက်များ၊ စနစ်/ပါဝါတပ်ဆင်ခြင်းပန်းကန်၊ ဆက်သွယ်မှုအပိုင်းအစ
PCB ဘုတ်အဖွဲ့ P2.5/P4/P5mm
ယခင်: ၆၄၀ × ၄၈၀-အလူမီနီယံသေတ္တာတစ်လုံး
နောက်တစ်ခု: 640 × 480-C အလူမီနီယံသေတ္တာ
500 × 1000-D အလူမီနီယံသေတ္တာ
500 × 1000-B အလူမီနီယံသေတ္တာ